Onye isi ala Central African Republic gara emume mmecha nke Boali 2 Hydropower Station-News-HNAC Technology Co., Ltd.
Onye isi ala Central African Republic gara emume mmecha nke ọdụ ụgbọ mmiri Boali 2
Oge: 2021-08-12 Hits: 36
N'August 11, 2021, mweghachi na owuwu nke Boali 2 Hydropower Station, ọdụ ụgbọ mmiri kacha ukwuu na Central African Republic nke HNAC mere, ka emere na saịtị ọrụ ahụ na Boali City, Umberambako Province, Central African Republic.
Onye isi ala Central African Republic Faustin Alchange Tuvadra, Onye isi oche nke National Assembly Sarangi, Prime Minister Henry-Marie Dondela, onye nnọchi anya China na Central Africa Chen Dong, onye ndụmọdụ China na ụlọ ọrụ azụmahịa China na Africa Gao Tiefeng, Iris, onye nnọchite anya otu African Development Bank Group, Minister of Energy and Water Development, Gọvanọ na osote Gọvanọ nke Umberram Bako Province, Onye isi oche nke Boali City Mission na onye otu nzuko omeiwu, onye isi njikwa nke China-Africa Electric Power Company na ndị ọrụ metụtara ya. ndị nnọchiteanya si China Gezhouba Group, HNAC Technology Co., Ltd, Shanxi Construction Investment Group na ndị ọzọ na-ekere òkè, ndị ọrụ si Boali City na ndị nnọchiteanya nke ìgwè mmadụ gara ememe. N'ịbụ onye ihe karịrị ndị ozi 300 sitere na mba dị iche iche na ndị obodo gbara akaebe ya, Onye isi ala Tuvadela ji otu ọpịpị rụọ ọrụ nrụpụta ọkụ, na mgbasa ozi obodo dị ka Central African National Television, "Zango Afrika", na Central African National News Agency sochiri wee kọwapụta. na ozugbo. Akpọrọ onye njikwa ọrụ HNAC Yang Xian ka ọ bịa emume mmecha ahụ n'aha ụlọ ọrụ ahụ wee nabata “Nrite Onye isi ala” nke Onye isi ala Central African Republic nyere.
Onye isi ala Tuvadela kwuru okwu na emume ahụ, jiri obi ụtọ kelee mmecha nke ọrụ Boali 2 na nhazi oge na ịdị mma. O kwuru na ọrụ ọkụ eletrik arụrụ n'ọrụ a gbochiri nsogbu ọkụ latrik nke ndị obodo ma baara ndị obodo ahụ uru. Ọ bụ ihe akaebe maka ọbụbụenyi na-adịte aka n'etiti mba abụọ a. O kelere nke ọma ụlọ ọrụ ndị China maka nkwado ihe owuwu enyere Central African Republic, ma too oke mbọ ike nke ndị sonyere n'ọrụ a.
Onye isi ala Tuvadela na-enyocha ọrụ Boali 2
Onye isi ala Tuvadra na-eji otu Pịa na-amalite ọrụ ike
Central African Republic bụ obodo nwere oke ala dị n'etiti etiti kọntinent Africa na otu n'ime mba ndị mepere emepe n'ụwa. Ọnụ ego mkpuchi ọkụ ọkụ nke mba bụ naanị 8%, na ọnụ ahịa ọkụ isi obodo bụ naanị 35%. Ụgbọ mmiri Boali 2 dị na Boali City, Umberambako Province, Central Africa. Ọdụdọ ọkụ a na-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ iri afọ ka emechara ya. Ihe mejupụtara ya na-aka nká nke ukwuu, mmejọ na-eme ugboro ugboro, na nrụpụta ọkụ eletrik ezughi oke, nke enweghị ike ikwe nkwa ọkụ eletrik kwa ụbọchị nke ndị bi na mpaghara ahụ. . N'afọ 2016, ụlọ akụ na-ahụ maka mmepe nke Africa kpebiri inye aka na gọọmentị China na ndị Africa maka ịrụgharị ọdụ ụgbọ ọkụ 10MW na nnyefe n'akụkụ mbụ nke ọdụ ụgbọ mmiri Boali 2 na iwu nke abụọ.
Nlele Panorama Project
Ọrụ a malitere na February 2019 wee wuchaa ya n'August 11, 2021. N'oge a na-arụ ọrụ a, a na-eme ya ọtụtụ ule dị ka ọrịa na-efe efe, agha na ihe mberede, ma ndị otu ọrụ ahụ enwebeghị ọgba aghara, haziri usoro sayensị, ma merie ya. ihe isi ike na mmụọ mmụọ dị elu iji hụ na arụchara ọrụ ahụ nke ọma.
Ngwucha na ọrụ nchịkwa nke ọrụ ahụ abụghị nanị imeziwanye ọnọdụ ụkọ ike mpaghara, kamakwa ọ na-enwe mmetụta dị mma na ntinye ego, azụmahịa na ọrụ na Central Africa, na-eme ka nkwụsi ike ọha na eze na ịkwalite mmepe akụ na ụba. Ọ bụ nnukwu ọrụ ibi ndụ na Central African Republic. .
N'ọdịnihu, HNAC na ndị ọrụ aka ọrụ ga-anọgide na-eguzo na saịtị ahụ iji nye ọrụ, ọrụ nlekọta na ọrụ nkà na ụzụ maka ọrụ ahụ.
Central African Republic dị n'etiti etiti Afrika, yana Cameroon n'ebe ọdịda anyanwụ, Sudan n'ebe ọwụwa anyanwụ, Chad n'ebe ugwu, na Kongo (Kinshasa) na Congo (Brazzaville) na ndịda, yana mpaghara ala. 623,000 square kilomita. Central Africa dị n'ebe okpomọkụ nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ. Ọdịiche okpomọkụ dị n'ime afọ niile dị obere (nkezi okpomọkụ kwa afọ bụ 26 Celsius C), mana ọdịiche dị n'etiti ehihie na abalị dị ukwuu. A na-ekewa afọ ahụ niile ka ọ bụrụ oge ọkọchị na oge mmiri ozuzo. Mee-October bụ oge mmiri ozuzo, na Nọvemba ruo Eprel bụ oge ọkọchị. Nkezi mmiri ozuzo kwa afọ bụ 1000-1600 mm, nke ji nwayọọ nwayọọ na-agbada site na ndịda ruo n'ebe ugwu. Central Africa nwere akụ mmiri. Isi osimiri gụnyere osimiri Ubangi na osimiri Wam. Ọ bụ otu n'ime mba iri anọ na itoolu ndị mepere emepe nke United Nations kwupụtara. Ihe karịrị 49% nke ndị bi na-ebi n'okpuru ahịrị ịda ogbenye, na ọnụ ọgụgụ ndị na-arụ ọrụ bụ ihe dịka 67% nke ndị ọrụ mba. Central Africa bụ ọrụ ugbo na ịzụ ụmụ anụmanụ na-achị, nwere nnukwu akụ sitere n'okike, akụrụngwa ụlọ ọrụ na-esighi ike na azụ azụ, mmepe akụ na ụba mba ngwa ngwa, yana ihe karịrị 74% nke ngwaahịa ụlọ ọrụ na ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị na-adabere na mbubata.
Nke mbụ: Ozi ọma | HNAC Technology Co., Ltd meriri ikere maka Guangdong Yuehai Wulan Nuclear Water Plant Project
Ọzọ: HNAC sonyeere na ọgbakọ 12th International Infrastructure Investment and Construction Summit Forum